PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - UMSAKAZI UZOVELA KUZALO EYI-BLESSER
UMSAKAZI UZOVELA KUZALO EYI-BLESSER
UHAMBELA phezulu umsakazi wesiteshi somphakathi esizinze emgungundlovu emuva kokuthola ithuba lokuvela emdlalweni uzalo oboniswa KWISABC 1.
Leli phephandaba lithole ukuthi u-aubrey Mbethe uzovela kulo mdlalo obukwa ngaphezulu kwayo yonke kumabonakude eningizimu Afrika. Ngokusho komthombo, lo msakazi odume ngelikamr Cool kumgungundlovu FM, ungomunye wabazobonakala maduzane kuzalo, eziqeshini okuthiwa zizokhuluma ngombango okhona kubanikazi bezitolo abaqhamuka kwamanye amazwe nabaselokishini lakwamashu.
Nasempilweni yangempela lolu daba lushubile kuyimanje ezweni lonke, nakulo leli lokishi, njengoba kuze kwangenelela uhulumeni nomasipala wetheku emuva kokuba osomabhizinisi bakwaMashu namalokishi akhelene nabo, benqumele osomabhizinisi bokufika ugwayi katiki. Bebethi mabavale, baphindele emazweni abo, ikakhulukazi abakuleli ngokungekho emthethweni.
Lo mdlalo usematheni kulezi zinsuku ngokufika komndeni omusha wabaphila nebala elimhlophe ababaleke emanguzi.
Kuzokhumbuleka ukuthi zolo lokhu kube nezidubedube, kusolwa ukuthi kunababulala abantu abanebala elimhlophe ngoba befuna izicubu ezithize zemizi- mba yabo ngoba bekholelwa wukuthi zenza imithi yokuceba.
Umthombo uthi kulo mdlalo u-aubrey uzokube engomunye wosomabhizinisi abagqugquzela ukuba kulwiswane nabokufika abanamabhizinisi, betoyitoya bagcine sebeboshwa. Uthi akagcini lapho kodwa ubuye avele eyiblesser ekilabhini yodumo kamaNgcobo kulo mdlalo, okuyizinto eziyinselelo njengamanje emphakathini, ikakhulukazi emalokishini.
Uvumile ethintwa YILANGA Langesonto ukuthi uke wayihambela inhlolokhono yenye ifilimu lapho egcine ethathwa yinkampani imizan Casting enabalingisi abaningi esibafake kulo mdlalo.
“Bengihlale ngifisa ukungena kwezokulingisa kodwa kunzima uma uhlala kude nedolobha elikhulu njengetheku ngoba nolwazi luba lufushane.
"Ngiyafisa ukuphumelela emkhakheni wamafilimu, ngigqame nasemidlalweni enjengalo uzalo.” Ube esenxusa ukuba ikhulunywe nabaphathi eyokulingisa kwakhe kulo mdlalo.
Kwezinye zezithombe anazo unosiyabonga Shibe olingisa ekaqhabanga kuzalo.
Nakuba umthombo uthi u-aubrey useqalile nokuqopha futhi lezi ziqephu zizovela emasontweni ambalwa ezayo, kodwa u-ayanda Mthiyane okhulumela lo mdlalo akathandanga ukucacisa ngokuzokwenzeka.
NGUMSAKAZI womgungundlovu FM umr Cool, okulindeleke abonakale kuzalo.